apuro wachi yakateerana 7 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Kuru Nhau & Ongororo Apple Watch Series 7 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Kuburitswa kweApple Watch Series 7 kuchiri kure kure; zvisinei, isu tave kutanga kunzwa makuhwa uye kuwana kudonhedza nezve iri kuuya smartwatch na Apple . Isu tinoziva, sezvazviri chokwadi, kuti Apple inoburitsa smartwatch nyowani gore rega kubva 2015, saka zvingangoita kuti Apple Watch Series 7 ichauya mukudonha kwa2021. Apple Yekuteedzana 6 yakaburitswa pamwe neine bhajeti-inoshamwaridzika, yakabviswa-pasi smartwatch, iyo Apple Tarisa SE , izvo zvinoita kuti tishamise kana Apple Watch Series 7 ichaperekedzwa neApple Watch SE 2. Tichiri kunzwa chero chinhu nezve izvo hazvo.
Kana iwe uchifarira izvo izvo Apple Watch Series 7 zvicharatidzira uye kuti ndezvipi zvekuvandudza zvichaunza kumusika we smartwatch, ino ndiyo nzvimbo yako. Pano, tinounganidza ese Apple Watch 7 makuhwa uye kubuda, pavanobuda, pamwe neruzivo-rwakafungidzirwa pane izvo zvatinotarisira kuona muApple Watch Series 7.
Unogona kuwana kunakidza ...
iPhone 13 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
iPad Pro (2021) zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Samsung Galaxy Active 3 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Apple Watch Series 7 zuva rekuburitsa
Apple Watch Series 7 mutengo
Apple Watch Series 7 dhizaini uye kuratidza
Apple Watch Series 7 specs uye maficha
Apple Watch Series 7 hupenyu hwebhatiri
Apple Watch Series 7 nhau
Apple Yekuteedzana 6
Apple Watch Series 7 Kuburitswa zuva
pakati paSeptember 2021 (inotarisirwa)
Sezvo isu tese tichiziva, denda rakanyatso zunza iyo mobile tech musika mu2020, uye kunyangwe isu takaona Apple ichinonoka kuzivisa iyo iPhone 12 yakateedzana , kambani yakwanisa kuburitsa iyo Apple Yekuteedzana 6 uye iyo Apple Tarisa SE musi waGunyana 15, 2020, sezvaitarisirwa. Kwemakore ikozvino Apple yanga ichizivisa yayo nyowani Apple Watch mune chiitiko neChipiri, pakati paGunyana, ine zuva repamutemo rekuburitsa Chishanu (zvakafanana, kana vhiki rinotevera).
Anonyatso kuzivikanwa muongorori muongorori Ming-Chi Kuo akataura zvekare kuti iyo Apple Watch Series 7 ichavhurwa muhafu yepiri ya2021, saka hatione chikonzero chekusahadzika kuti tichave tichiona Apple Watch 7 munaGunyana wegore rino.
Apple Kuona Mutsara 7 Mutengo
Pamwe kutenderedza $ 399 (inotarisirwa)
Tichifunga nezve chokwadi ichiri kutanga chaizvo kweApple Watch Series 7 kudonhedza kwemitengo kuti uratidzike mu tech nyika, hatisati tanzwa chero chinhu chakanangana nezve mutengo weiyo iri kuuya premium smartwatch parizvino. Isu tinoziva kuti Apple mitengo yemaprimiyamu smartwatches pamusoro pemakore anga achinyatsoenderana. Ehe, isu tine inodhura Apple Watch SE inotangira pamadhora 279, asi isu hatitarisiri kuti mitengo iende yakaderera iyo yekutanga Apple Watch 7 kunze kwekunge Apple yasarudza kuenda kune imwe mhando yekuchinja kwemitengo, izvo zvatisina chokwadi nazvo.
Parizvino, bheji rakachengetedzeka nderekufungidzira kuti Apple Watch Series 7 iri kuda kutenderedza zvinoitwa neApple Watch 6: iyo GPS-chete, 40mm musiyano iri $ 399, iyo LTE musiyano iri $ 100 zvimwe. Iyo yakakura 44mm imwe ndeyechokwadi, inodhura, uye Apple zvakare inopa premium titanium kuvaka kune iyo kesi iyo inodhura zvakanyanya.
Tarisa uone yedu Yakanakisa Apple Kuona madhiri chinyorwa
Apple Yekucherechedza Series 7 Dhizaini uye Ratidza
Zano razvino uno paApple Watch Series 7 & apos; dhizaini inoratidza kuti vagadziri veCupertino vakakwanisa kudimbura mabhezuru ewatchwatch zvishoma; asi wachi pachayo ichave, sekutaura kwaMark Gurman, mukobvu. Izvi zvinogona kureva kuti Apple iri kuronga kuisa bhatiri rakakura mairi.
Imwe yakakosha dhizaini dhizaini yakataurwa nemushumo inoenderana neiyo Series 7 & apos; s kuratidza. Izvo zvinonzi zvicharatidza nyowani yekuratidzira lamination nzira yekugadzira, iyo ichaita kuti chifukidziro pamusoro pechiratidzo chaicho chitete. Naizvozvo, iyo chaiyo yekuratidzira ichave padyo nepamusoro pevhu: kufamba kunowedzera kupenya uye kuoneka kwadzo mberi.
Muongorori ane mukurumbira Ming-Chi Kuo akataura pakutanga kuti anoona shanduko hombe dhizaini ichiuya kuApple Watch Series 7, yakashuma 9to5Mac . Muongorori haana kutaura chero ruzivo, kunze kwekufungidzira kuti iko chimiro-chinhu chinoshanduka. Zvakanaka, zvaigona kunge zvainakidza kuona Apple gomba remakona emakona mafomu ayo eApple Watches anozivikanwa zvakadaro, asi izvo zvingangodaro zvisingauye kubva kukambani yakasindimara yakasiya inotyiwa nevazhinji 'notch' kwemakore pafoni dzavo (uye zvakadaro anayo!). Pamwe izvo zvataurwa pamusoro zvishoma kudzoreredza nyaya uye kuratidza ndizvo zvairehwa naKoo.
Munguva pfupi yapfuura, kuvuza kukuru kwaitika YouTuber Jon Prosser iri kutipa rumbonera rwekuti dhizaini yacho inotaridzika sei. Akaburitsa zvirevo zvinoenderana neCAD mafaera eApple Watch Series 7, uye isu tinogona kuona iyo smartwatch ikozvino ine furemu furemu pane iyo yakatenderera inoonekwa pane izvozvi Apple Watches. Iyi shanduko isinganzwisisike mukugadzirwa inowirirana neiyo iPhone 12 akateedzana kutarisa uye iyo Pro Pro (2021). Apple inoita kunge yakagadzira mativi kwete akapinza sepaiyo iPhone 12 hazvo, zvirokwazvo kudzivirira kudonha muchiuno chevashandisi.
Iyo Apple Watch 7 inonzi ine furemu yesimbi furemu, panzvimbo yeiyo yakatenderedzwa
Isu tinoonawo pamifananidzo yekupa iyo iyo Apple Watch Series 7 & apos; s digital korona uye bhatani repadivi zvinochengeta zvakafanana kutarisa sepakutanga. Isu tinoona mutsauko muhukuru hwevatauri paWatch, asi parizvino, chikonzero cheiyi shanduko hachizivikanwe. Zvinotaridza kuti Series 7 icharamba ichienderana nezviripo Apple Watch mabhendi, asi kudonha hakuna kupa chero ruzivo pane saizi yeiyo smartwatch.
Zvimwe zvinoshandurwa naProsser zvinoratidza zvinogoneka mavara eApple Watch 7
Pamusoro pezvo, iyo inodonha inotaura kuti girini girini inonzi yakarongerwa Series 7 futi. Isu tinoziva kuti Apple yanga ichiedza kupedzisa kwekuyedza, saka hatigone kuva 100% chokwadi chekuti girini Apple Watch 7 inozopedzisira yaburitswa munaGunyana, saka chengeta izvo mupfungwa.
Tinogona kuona green Apple Watch Series 7 munaGunyana
Iyo Apple Watch Series 6 yakaunza nyowani yekuona bhendi dhizaini, inonzi iyo Solo Loop, isina zvikamu zvinopindirana, zvinotambanudzwa kuti zviiswe paruoko rwako uye kubviswa. Apple yakaunzawo Chigadzirwa RED kekutanga paApple Watch neApple Watch 6. Saka isu tinofanirwa kumirira kuti tione zvimwe zvekuvandudza dhizaini izvo Apple yakachengetera iyo Apple Watch Series 7. Tinogona kutarisira zvakachengeteka mamwe anonakidza ebhendi mavara uye zvirokwazvo zvimwe zviso zvitsva zveWatch.
Pamusoro pezvo, Maka Gurman anobva kuBloomberg akataura kuti Apple inogona kunge ichishanda pane yakashata yeApple Watch, yakanangana nevatambi. Vakati zvinhu zvekutarisa zveWatch & apos; zvinogona kunge zvakagadzirwa nerabha kuitira kuti zvigone kuramba zvichikwenya kupfuura sarudzo dziripo (aruminiyamu, simbi isina chinhu, uye titanium). Uye ikozvino, iye akataura chaizvo kuti iyi yakaoma Apple Watch ingangouya semusiyano weiyo Series 8, panzvimbo peiyo Series 7.
Apple Watch Series 7 Specs uye Zvimiro
Chinyanyo kuzivikanwa nezve iri kuuya Apple Watch 7 maratidziro, asi tinoziva kuti tichaona kuvandudzwa pamusoro pazvino Apple Watch Series 6. Ndeipi nzira chaiyo, isu tichiri kuzoziva. Isu ikozvino tanzwa iyo Series 7 ichauya nekukurumidza S7 nhare chipset.
Sekureva kwechimiro chakatarwa, iyo Apple Watch Series 7, maererano neshumo razvino kwazvo rinobva Maka Gurman , haizoratidze runyerekupe isiri-inavsive yeropa glucose kuongorora , zvinopesana nezvakataurwa kare neguhwa.
Zvisinei, kuongorora shuga yeropa hakusi zvachose kunze kwemubvunzo wekubuditswa kweApple Watch. Iko & apos; s ichiri mukana Apple ingangokwanisa kuona maitiro ekuita zvakakosha kuita izvi Apple patent neU.S. Patent uye Yekutengesa Hofisi chokwadi. Nekudaro, kwete ino nguva, zvakadaro.
Mufananidzo kubva patent
Isu tinoziva yakakosha-inoenderana nehutano chiitiko senge yeropa glucose yekutarisa inoda kuve yakanyatsojeka kuvimbisa mushandisi & apos; s hutano uye chengetedzo hazvizowani & apos; zvichave panjodzi. Ndosaka zvaigona kunge zvisina kugadzirira nenguva yeChitsauko 7.
Mako Gurman & apos; s mushumo paApple Watch Series 7 yakataura zvakare iyo smartwatch ichauya neiri nani waya yekubatanidza ine Ultra-wideband gadziriso.
Sekune mamwe maitiro eApple Watch Series 7 ane hanya, isu tinotarisira kuti mazhinji eApple Watch 6 & apos; s maficha kuve aripo pa7 zvakare. Parizvino, iyo Apple Watch Series 6 inouya neECG yekutarisa, yekutarisa kurara, uye oksijeni yekuzadza kuongorora, padivi pekushambidza mawoko uye zviyeuchidzo. Aya maficha ese makuru makuru ane chekuita nezvehutano anouya neApple Watch. Isu hatisati tave nerunyerekupe rwekuti izvi zvinhu zvichaona kumwe kuvandudzwa neApple kana kwete.
Chimwe chinhu chinonakidza chatakambonzwa nezve Apple Watch Series 7 inouya kubva kune patent application inoratidza Cupertino anogona kubvisa injini yeTaptic kubva kuApple Watch 7 uye gadzira iyo haptic mhinduro vashandisi veApple Watch vanofarira nebhatiri.
Zvinoenderana nepatent, bhatiri rinosungirirwa pachiratidziro chewachi uye rinokwanisa kuburitsa mhinduro haptic pazvinenge zvichidikanwa. Muchokwadi, kana iyi patent ikaona mwenje wekugadzira, zvinobatsira kusunungura nzvimbo yakawanda mumuviri weApple Watch kune yakakura bhatiri sero. Ramba uchifunga kunyange zvakadaro, kuti, iine chero patent, kunyorera mukati mako hakusi vimbiso yekuti chimiro kana dhizaini yakataurwa ichagadzirwa. Pachine akawanda mapatent asingatombo zadzikiswa.
Imwe bvumidzwa inoratidza kuti Apple inogona zvakare kusanganisira kuwongorora kweropa mune smartwatch iri kuuya, tarisiro, iyo Apple Watch 7. Kuongorora kweropa kwatovepo pamakwikwi: iyo Galaxy Tarisa 3 inayo, uye inogamuchirwa neFDA zvakare, kunyange ichida kuyerwa mwedzi wega-wega kuratidza mhedzisiro.
Apple Yekucherechedza Series 7 Bhatiri hupenyu
Zvakanaka, kwave kuine mamwe maratidzi maererano nehupenyu hwebhatiri pane iri kuuya Apple Watch. Iyo yatakambotaura nezvayo nezve haptic injini ichibviswa, kana Apple ichigona kuita kuti ishande, inobvumidza kuti hombe bhatiri sero iiswe muApple Watch.
Kunze kweizvozvo, mune patent yakaonekwa naPatentlyApple , kambani iri kutsvaga mhinduro nebhendi reApple Watch iro rakapinza mabhatiri mariri rekuwedzera hupenyu hwebhatiri rewachi.
Dhizaini yacho inoita kunge isiri-Apple, asi isu tichaona izvo Cupertino achauya nazvo kuvimbisa hupenyu huri nani hwebhatiri pane yayo yemberi smartwatch.
Nezve mamiriro, iyo Apple Watch Series 6 haina kuunza kuvandudzwa kwehupenyu hwebhatiri pamusoro peApple Watch Series 5, uye ese ari maviri smartwatches 'hupenyu hwebhatiri hwakaverengerwa kusvika kusvika 18h naApple. Mune yedu Apple Tarisa 6 kuongorora , iyo smartwatch yakagara kweinenge 18h nekumwe kurovedzwa, uye yaigona kutopfuurira zvakanyanya pakubhadharisa kamwe chete kana ukasashanda. Izvo zvinoramba zvichionekwa kuti sei uye kana iyo Apple Watch Series 7 ichagadziridzwa mubazi rehupenyu hwebhatiri.
Apple Watch Series 7 uyezve Apple News
ipad mini 5 nhema chishanu 2019
Ratidza mirroring pane yekutanga-gen iPad? Heino & apos; s sei
Google Zvino yava kukuratidza magaraji epeturu munzira yako
Iwe unomboshandisa Reachability ficha pane yako iPhone?
Otterbox Commuter Series Nyaya yeApple iPhone 6 Plus Ongororo
Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Cherechedzo 10+
Tinder inononoka kuburitswa kwepasirese kweSwipe Husiku, chiitiko chayo chekudyidzana